sextips Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / sextips
खबरडेस्क, ८ बैशाख । यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने भएकाले तपाईंकी प्रेमिकाको भय जायज हो । किनभने अनिच्छित गर्भ रहँदा त्यसका अनेकन नकारात्मक असर पर्न सक्छन् । प्रायजसो: नहुने भए पनि कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एकमात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन सक्छ… बाँकी अंश »
मेरो केटी साथीले मलाई जहिले पनि किन हेप्छिन् ?
Tags: alert-news, benifitsofsex, emotions, sextips, sexual
खबरडेस्क, बैशाख २ गते । राम्रोसँग लिङ्ग उत्तेजित नहुने कारण शारिरीक तथा मानसिक दुवै हुन सक्छन् । लिङ्गको उत्थित हुन सक्ने तन्तुमा रक्तप्रवाहलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि स्थिति लिङ्ग उत्तेजना नहुने सम्भावित कारण बन्न सक्छ । मधुमेह, मृगौलाको… बाँकी अंश »
खबरडेस्क,२३ चैत । यौन आनन्द र महिला यौन प्रतिक्रिया चक्रको सन्दर्भमा पुरुषमा जस्तै महिलामा पनि उत्तेजनाको चरण, एबितभबग एजबकभ, चरमसुखको चरण र च्भकयगितष्यल एजबकभ हुन्छ । प्लाटो फेजमा भएको यौन स्टिमुलेसन निरन्तर रूपमा बढाउँदै लान सकिए त्यस्तो बिन्दुमा पुगिन्छ जहाँ… बाँकी अंश »
याैन सम्पर्कको बेलामा लोग्नेले लगाए स्वास्नीको कपडा, के यो समस्या हो ?
Tags: featured, sexdesire, sexproblems, sextips
खबरडेस्क,१७ चैत । तपाईंले राख्नुभएको समस्या केही अन्य पुरुषमा पनि देखिएका छन् । यो विषयमा विभिन्न अध्ययन-अनुसन्धान पनि भएका छन्, जसले यकिन तथ्य पत्ता लगाउन नसके पनि लगभग १ करोड पुरुषमा १ लाख पुरुषले क्रस ड्रेसिङ गर्ने पाइएको छ ।… बाँकी अंश »
यस्तो अवस्थामा गर्भ रहन्छ कि रहदैन ?
Tags: featured, pregnance, pregnancytips, pregnant, sextips
खबरडेस्क,१६ चैत । गर्भ रहनका लागि महिलाको अण्ड र पुरुषको शुक्रकीटबीच समायोजन हुनुपर्छ । अण्ड उत्पादन हुन महिनावारी भएको कम्तीमा पनि ८ देखि १४ दिन लाग्ने भएकाले महिनावारीको तीन दिनमै गर्भ रहने सम्भावना हुँदैन । यो गणना महिनावारी भएको दिनबाट… बाँकी अंश »
खबरडेस्क, १० चैत । सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा त्यस्तो किसिमको शरीर भएकोे व्यक्ति जसको दृश्यपान गर्दा आनन्द प्राप्त हुन्छ वा भनौं सुन्दर लाग्छन्, त्यसलाई नै हामी आकर्षक शरीरको भन्न सक्छौं । विकासवादी मनोविज्ञानको कुरा गर्दा पनि महिलाको तुलनामा पुरुषको शारीरिक स्वरूपलाई… बाँकी अंश »
पति–पत्नीले गर्भाधानअगाडि अपनाउनुपर्ने सतर्कता
Tags: alert-news, cautions, healthtips, in-focus, pregnant, sextips, wifehusband
खबरडेस्क,१ चैत । गर्भधारण एउटा प्राकृतिक नियम हो । यो आदिम युगदेखि अनन्तदेखि चल्दै आएको प्रक्रिया हो । गर्भधारणभन्दा अगाडि आमाको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर र शारीरिक तन्दुरुस्ती हेर्नु धेरै दृष्टिबाट उचित हुन्छ । महिलाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम छ भने… बाँकी अंश »
Tags: habit, health, in-odd, masturbate, reduce, sextips, sexual
खबरडेस्क, २८ फागुन । किशोरावस्था तथा युवावस्थामा यौनइच्छा सबैभन्दा तीव्र र बढी हुने भए पनि उनीहरूले गर्ने यौन व्यवहारमा रोकमात्र लगाइन्छ । अहिले युवाहरूको विवाह हुने उमेर बढी हुँदै गए पनि यौनेच्छा मेट्ने बाटोचाहिँ खुला गरिँदैन । हस्तमैथुन पनि त्यसैको… बाँकी अंश »
जाडोको लागि केहि सेक्स टिप्स
Tags: in-odd, sexposition, sextips, sexual, wintersex
खबरडेस्क,२७ फागुन । – यौन सम्बन्धमा नयाँपन ल्याउन केवल बेडरुम मात्र होइन, वाथरुम, ड्रइङरुमजस्ता स्थान पनि रोजौँ । –स्पर्श अभिव्यक्तिको एउटा सशक्त माध्यम हो । त्यसैले एक–अर्कालाई प्रेमपूर्वक स्पर्श गरौँ । –यो सिजनमा धेरै जाडो हुन्छ । त्यसैले एक–अर्काको सामिप्यता… बाँकी अंश »